नेपाली बोल्न जानेन भन्दैमा नेपाली हैन भन्न पाईन्छ?
-सुनिल मणि दाहाल
ईनेप्लिज तथा रेडियो जिन्दगि को बार्षिक उत्सव कार्यक्रम। तस्बिरः इनेप्लिज
अमेरिकामा जसरि नेपालीको संख्या बढ्दै छ त्यसरी नै नेपाली भाषीद्वारा सञ्चालित धेरै अनलाईन मिडिया खुलेका छन् र अझै खुल्ने क्रममा छन्। यसै मेलोमा वाशिंटन डिसी महानगर क्षेत्र अन्तर्गत भर्जिनिया राज्यमा सन् २०१२ मा सुरू भएको ईनेप्लिज डटकमले आफ्नो पाँचौ वार्षिकोत्सव शनिबार मनायो।
भर्जिनिया राज्यबाट गत वर्ष सञ्चालित रेडियो जिन्दगीले एक वर्ष पुरा गरेको अवसर पारेर संयुक्त वार्षिकउत्सव कार्यक्रम आयोजना गरेको ईनेप्लिजले जनाएको छ।
मिडियाको अनौठो सम्मान:
कार्यक्रममा बिभिन्न क्षेत्रमा ख्याती कमाएका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई प्रमाण पत्र र खादाले सम्मान गरिएको थियो। नेपाल र नेपालीको पहिचान गराउने एक दर्जन नेपाली मूलका व्यक्तिलाई ‘सामाजिक सामुदायिक नायक’ द्वारा सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बिभिन्न क्षेत्रमा काम गरि देशको शिर उच्च राख्नेलाई हौसला तथा मनोबल उच्च राख्न भन्दै सम्मान गरिएको संस्थाले जनाएको छ। तर, कुन प्रक्रिया अपनाएर त्यस्ता ब्यक्ति र प्रतिभा छनोट गरियो भन्ने ब्यहोराको जानकारी पाउन नसकेको भन्दै पत्रकार तथा अन्य सहभागीहरुले आश्चर्य मानेका थिए।
कार्यक्रम प्रस्तोताले मिडियाका तर्फबाट ‘सामाजिक सामुदायिक नायक’ भन्दै १६ जनालाई सम्मान बुझ्न स्टेजमा बोलाएका थिए। सम्मान पाउनेको लस्करमा कुनै पनि सन्चारकर्मी परेनन्। त्यस्तै, लेखक तथा सहयोगी पत्रकारले निःशुल्क सहयोग गरे बापतको धन्यबाद समेत पाउन सकेनन्। ईनेप्लिज तथा रेडियो जिन्दगीको संयुक्त वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा ‘सञ्चार माध्यमले’ सम्मान गरेको आयोजकले जनाएका छन्। सम्मान कार्यक्रम पश्चात सबैमा एउटा कौतुलता रह्यो – १६ जनालाई गरिएको भनिएको सम्मान मिडियाको सम्मान थियो वा एक मिडिया संस्थाबाट प्रदान गरिएको निजी सम्मान?
त्यस्तै उक्त सम्मान कार्यक्रमले बिभिन्न प्रश्नहरु सृजना गरेको छ। त्यस मध्येको प्रमुख प्रश्न हो- समाजलाई पुरस्कृत गर्ने,सम्मान गर्ने वा अवार्ड दिने संस्था मिडिया हो? दोस्रो प्रश्न- त्यती ठूलो नाम दिइएको अवार्डका लागि के कस्तो छनौट बिधी अपनाईयो, सार्वजनिक हुनु पर्दैन? तेस्रो प्रश्न- त्यस्तो अवार्ड वा व्यक्तिगत रुपमा प्रदान गरिएको सम्मानका लागि राजदूत जस्तो आधिकारिक ब्यक्ति संलग्न हुनु कति सही थियो?
आसन ग्रहण र खादा संस्कार –अलोकप्रिय संस्कारको पुनरावृत्ति
कार्यक्रममा आएका अतिथीलाई गरिएको एक घन्टा लामो आसन ग्रहण कार्यक्रम र खादा पहिरणले कार्यक्रम पट्यारलाग्दो भएको थियो। बिगत दुई वर्षदेखी नेपाली भाषीले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता नेपाली परम्परावादी कार्यक्रमको सञ्चालन ढाँचालाई अमेरिकामा बिरोध गर्दै बन्द गरिएको थियो। तर त्यही पुरानो अशोभनीय खादा संस्कारलाई मिडिया जस्तो जिम्मेवार निकायले दोहोर्‍याउनु लाज लाग्दो महसुश गरिएको थियो।
सञ्चालकको अमर्यादित अभिब्यक्ति: नेपाली बोल्न नजान्नेलाई नेपाली मान्दिनँ
कार्यक्रम सञ्चालक तथा रेडियो जिन्दगीका प्रस्तोताले पटक पटक आफू खाँटी नेपाली भएको र जो नेपाली बोल्न जान्दैन त्यसलाई म नेपाली मान्दिनँ भन्दै तल्लो स्तरमा प्रस्तुत हुँदा धेरै अविभावकले अमिलो मन पारेका थिए। के नेपाली बोल्न नजान्दैमा नेपाली भइदैन? प्रस्तोताले नेपाली बोल्न नजान्नेलाई म नेपाली मान्दिन भन्दैमा कोही नेपाली हुनबाट बन्चित हुने पनि होइन। झन्डै एक-तिहाइ नेपालको जनसंख्याले नेपाली मातृ भाषाको रूपमा बोल्छन्। के बाँकि नेपाली मातृ भाषा बोल्न नजान्नेहरु नेपाली हैनन् भन्न मिल्छ? भाषा आधारभूत सञ्चार माध्यम हो जस मार्फत हामी आफ्ना विचार ब्यक्त गर्छौ।
आफ्ना विचार ब्यक्त गर्न नेपाली नै जानेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्ना कुरा अरूको मुखमा कोच्याउनु, आरोपलाई सत्य झैं प्रस्तुत गर्नु गल्ती हुन्छ । अतः जानेर होस वा नजानेर होस, जिम्मेवार मिडियाले संचालन गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यस्तो अमर्यादित र अमानवीय भनाइ राख्नु अवस्य पनि खेदजनक छ ।
शुभकामना र सुझावः
ईनेप्लिजको एक सहयोगी र शुभचिन्तकका हैसियतले भन्नु पर्दा आगामी दिनमा लोकप्रियताका लागि नभै आफ्ना सहयोगी र समुदायलाई साथमा लिदै सत्य र तथ्य समाचार सम्प्रेषण गरोस्। आयोजकले भने झै आफैं धामी आफै बोक्सी झै अवार्ड पनि त्यसै अनुरुप आफैं छनौट गरी वितरण गरिएको पो हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । तथ्य जे होस, मिडिया भए पछि आफ्नो बाटो नबिराई पत्रकारिताको कार्य क्षेत्र भित्र बसेर कार्य गर्नु नै पत्रकारिताको भावना अनुरुप हुनेछ र यसले भविष्यमा प्रगतिको गोरेटो कोर्न मद्दत गर्ने छ।
समाजमा विद्यमान कुसंस्कारको अन्त्य गर्दै पत्रकारिताको मर्म र भावनालाई साक्षि राखी पत्रकारिताको कार्यक्षेत्र अनुसारको कार्य गर्न सफलता मिलोस्। अन्तमा, इनेप्लीजको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ५, २०७४ ०९:११:२०